केटा बनेर दाइजो लिने २६ वर्षीय युवती पक्राउ, दिईन् सनसनीपूर्ण बयान! - KlipMandu
एजेन्सी, हामी सबैले दाइजोको नदिएको निहुमा महिलाहरुमाथि आक्रमण गर्ने, मार्ने धम्कि दिने र मारिएका घटनाहरु सुनिरहेका छौ। तर महिलाले नै दाइजो लिएको घटना भने कमै सुनिन्छ। भारतको उत्तरी राज्य उत्तराखण्डमा यस्तो घटना घटेको छ, जुन सुन्दै अचम्म लाग्छ । वास्तविक नाम स्वीटी रहेकी २६ वर्षीय युवतीको अर्को नाम कृष्ण हो। उनले पुरुष बनेर २ महिलालाई दाइजो लिई फरार भएका थिए। अहिले उनि प्रहरी हिरासतमा छिन्। उनले २०१४ मा पहिलो विवाह गरेकी थिइन्। पहिलो श्रीमतीको माइतीबाट उनले ८ लाख ५० हजार लिएको आरोप छ। प्रहरीका अनुसार स्विटीले पहिलो पत्नीलाई विवाह गरेलगतै छोडेकी थिइन्।
उनले दोस्रो विवाह भने २०१७ को अप्रिल महिनामा गरेकी थिइन् । प्रहरीको बयानमा स्विटीले आफुलाई बच्चैदेखि पुरुष बन्न रहर लागेको बताएकी छिन्। साथै प्रहरी अधिकारी जनामेजय खान्दुरीले बिबिसीसँग कुरा गर्दै भने, ‘उनको बोलिचाली हेर्दा केटा जस्तै देखिन्छ। सुरुमा हामीले उनि कृष्णले भनेको कुरा पत्याएनौ पछि उनको स्वास्थ्य परिक्षण गर्दा उनि केटि नै भएको पुष्टि भयो ।
← पहिलो गासमा नै ढुंगा ! छ वटै चिनियाँ जहाज आए, तर चलेनन्
हाँसो रोक्न नसकिने अचम्म लाग्दा तस्विरहरु ! →
April 17, 2018 klipmandu 0